नेकपाका नेताको ह'त्या आ'रोपमा काँग्रेसका वडाध्यक्ष
घरायसी वि’वादका कारण छोराद्वारा आमाको ह’त्या !
नेकपाका नेताको ह’त्या आ’रोपमा काँग्रेसका वडाध्यक्ष
सर्लाही ०४ साउन। नेकपाका एक स्थानीय नेताको ह’त्या भएको छ। उक्त ह’त्याको अभियोगमा सर्लाही जिल्लाका एक वडाध्यक्षलाई जे’ल चलान गरिएको छ। ह’त्या अभियोगमा सर्लाहीका रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर–४ का वडाध्यक्ष रामनरेश महतोलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि का’रागार चलान गरेको हो ।
गत असार ७ मा धा’रिलो ह’तियार प्र’हार गरी एक व्यक्तिलाई ह’त्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकैको खेतमा श’व फेला परेको थियो उक्त श’व स्थानिय नेता रामजनमको थियो। ह’त्या लगत्तै प्रहरीले आ’रोपित वडाध्यक्ष महतोलाई पक्राउ गरेको हो।
६० वर्षीय रामजनम भनिने रामजल राय, रामनगर गाउँपालिका वडा नम्बर–४ का बासिन्दा हुन्। बहुअर्वाका ६० वर्षीय रामजनम रायको ह’त्या घ’टनामा वडाध्यक्ष महतो मुछिएका थिए । सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीनबन्धु बरालको इजलाशमा थुनछेक बहसपछि वडाध्यक्ष महतोलाई पुर्पक्षमा का’रागार चलान गर्ने आदेश भएको छ । अदालतको आदेश अनुसार नै वडाध्यक्ष महतोलाई गत शुक्रबार नै गौर का’रागार चलान गरिएको छ ।
रामजलको ह’त्यापछि उनको परिवारले नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष महतोसहित ९ जनाविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। जाहेरी परेका मध्ये ८ जना अझै पनि फरार छन् ।
नेता रामजलको ह’त्यापछि नेकपा र काँग्रेस एक–अर्का विरुद्ध पटक–पटक वि’रोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
यसैक्रममा दुवै पार्टीका कार्यकर्ताबीच असार १४ गते धनकौल गाउँपालिकामा दोहोरो झ’डप हुँदा प्रहरीसहित करिब दुई दर्जन जति घाइते पनि भएका थिए।
कञ्चनपुरमा फरक फरक स्थानमा तीन जनाको शव भेटियो
बाख्रा चराउन गएकी शारदा राति अबेरसम्म घरमा नआउँदा स्थानीयवासीले खोजी गरेपछि …
धादिङमा स्कार्पियो दुर्घटना ५ जना घाइते २ जनाको अवस्था गम्भीर
जर्मनीमा कोरोनाको दोस्रो वेभ : संक्रमितको संख्या पाँच लाख नाघ्यो भन्दा बढी
टर्की, ग्रिस र अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प ! मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै
केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास…
आमाबाबुको परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ, भर्खर जन्मेको तिम्ल्याहा भने कोरोना पोजेटिभ